QEEXIDA IYO SAWIRADA NOOCYADA CAANKA AH EE CAANKA AH - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Noocyada Caadiga ah ee caadiga ah
La soco geedo ubax ah iyo geedo had iyo goorba soo jiidanaya fiiro gaar ah oo si dhib leh uma tagi karaan qof aan indho la'aan u arkin muuqaalkan soo jiidashada leh.
Sakura, Magnolia, lilac - mid kasta oo ka mid ah dhirtaas inta lagu jiro muddada ubax waxay awood u leedahay inay kor u qaado jinniyada iyo indhaha dad badan. Liiskaan, waxaad ku dari kartaa oo hubaal ah - geedo madaxtooyada, oo si weyn u ubaxsan ubaxyo madow oo ah casaan casaan.
Maqaalkani, waxaan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno isaga. Muxuu jimicsigu u egyahay, meeshee ka yimid, sidee ayay u heshay magaceeda, sharaxaadda noocyada kala duwan - akhri waxyaabahan iyo xaqiiqooyin kale oo ku saabsan geedka hoos ku qoran.
Cercis (luuq Cercis), ama guduud - caleemaha geedaha gaajo iyo geedo ka mid ah qoyska legume. Waxay ku koraan dabeecadda duurka ee Aasiya, Mediterranean, North America.
Ma taqaanaa? Cercis magaciisa ayuu ka helay ereyga Giriigga ah ee loogu talagalay "gawaarida". Waxaa loo yaqaan magaca miraha - digirta, oo u eg qaab fara badan.
Zercis wuxuu ku koraa dhererka 18 mitir, taajkiisa waa mid cajiib leh, qaab ah teendho ama kubad. Geedo badanaa waxay u koraan si aan caadi aheyn, oo isku laaban. Warshadu waxay leedahay caleemo wareegsan ama ka baxsan. Xagaaga waa cagaar, xilliga dayrta waxay isu beddelaan jaalle, jaale-jaale ah, dayrta jiilaalka.
Ubaxa Morphaha Bloom guga, sida caadiga ah ee sannadka afaraad ka dib markii laga beerto. Iyadoo ku xiran nooca ubaxa waxaa lagu ururiyaa rucubo ama buraashyo, waxay ka koraan axler caleemaha ama waxay ku yaalaan jirridda. Gaar ahaan si aan caadi ahayn, jaleecadu waxay u egyihiin marka uu ubaxayo ka hor inta aan caleemaha muuqan. Kadibna waxay u muuqataa in laamaha gebi ahaanba la marsiiyo casaan, guduud ama casaan.
Inta lagu jiro xilliga ubax, kaas oo soconaya qiyaas ahaan hal bil, geedku wuxuu ka soo baxaa caraf udgoon oo shinni ah, sidaas darteed waa dhirta malab. Miraha waxaa lagu sameeyaa gudaha 10 cm dheer, mid kasta oo ka kooban 4 ilaa 7 digir. Geedka wuxuu midho dhoobo ah bisha August.
Purple waa warshad aad u diiran oo iftiin leh. Sababtoo ah mawduucan oo ka mid ah shimbiraha, beerashada iyo daryeelka waxay noqdaan dhibaato dhibicda cimilada leh xilliga jiilaal qabow.
Waa muhiim! Saddex nooc oo kaliya ayaa u dulqaadan kara miraha yar: Canadian, galbeedka iyo kelyaha-qaabeeya. Biyaha ugu adkeysta iyaga ayaa ah Canadian Canadian-ka.
Geedku wuxuu jecel yahay carradu leh dheecaan wanaagsan, la gooyey. Aan ahayn qoyaan-jecel. La faafiyo by abuur iyo dhirta (habeynta, gooyn) hababka. Waxaa loo dulqaadanayaa manjooyin - dhirta dhalinyaradu waxay ku habboon yihiin samaynta noocyo kala duwan oo taajir ah. Iskawirid cayayaanka iyo cudurada.
Purple waa warshad dilka ah - waxay ku noolaan kartaa ilaa 70 sano. Dabeecadda, waxaa jira 6 ilaa 10 nooc oo hub ah. Waxay ku kala duwan yihiin dhererka dhererka, qaabka iyo midabka ubaxa, heerka diidmada qabowga. Qaar ka mid ah ayaa si guul leh loo beeray. Waxaan qeexaynaa kuwa ugu caansan.
Cercis Griffith (Cercis griffithii) aad ayey u yar tahay qaabka geedka. Sida caadiga ah, wuxuu ku koraa 4-mitir mitir leh taaj oo ballaaran. Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah, waxay ku koraan buuraha buuran ee ku yaalla Bartamaha Aasiya, Iran, iyo Afgaanistaan. Sidaa darteed, nooca guduudka waa mid aad u diirran oo aan ku habooneyn in laga beerto dhexda dhexe.
Ciriiri waxay ku wareegsanyihiin caleemo cagaaran oo dhalaalaya 5-8 cm dheer, kilyaha-qaabeeya qoto dheer oo qoto dheer. Leaves muuqan kaddib markii ubax. Ubaxyada waxaa lagu uruuriyaa burushyada gaaban, waxay leeyihiin midab casaan ama midabka casaanka ah. Kala soocdo ka hor noocyada kale: dhammaadka Abriil - bilowga Maajo. Miraha ayaa sidoo kale u bislaadaan sidoo kale: in July-August.
Cercis Yurub (Cercis siliquastrum), ama mid caadi ah (qeybaha) Si kastaba ha ahaatee, noocyo kala duwan oo Canadian ah, si kastaba ha ahaatee, waxoogaa hooseeya, waxay leedahay ubaxyo waaweyn (ilaa 2.5 cm dhexroor) iyo caleemo yaryar. Dhererka xaashida waxay gaartaa 8 cm, waxayna yihiin qaabab kala duwan oo leh qaabka wadnaha ku dhisan.
Noocyada Tani waxay Blooms Rose-guduud. Xilliga ubaxu wuxuu socdaa illaa bil - laga bilaabo Abriil ilaa Maajo, wuxuu ku dhamaanayaa sida ugu dhakhsaha badan ee caleemaha u muuqdaan.
Heerka ugu sarreeya ee Cercis Yurub waa 10 m. Wuxuu u koraa sidii geed, sidoo kale wuxuu leeyahay qaabab geedeed. Jirkiisu waa mid qaro weyn, badana aan lahayn.
Tan iyo dabeecadda noocyada noocan ah waxay ku koraan wadamada Mediterranean iyo Aasiya, waa mid aad u kulul. Ha u dulqaadanin barafka hoose -16 ºC - barafoobid iyo joojinta ubax.
Ma taqaanaa? Faransiiska, noocyada noocaas ah waxaa loo yaqaan "geedka Judea" (Israa'iil casriga ah) sababtoo ah bay'ad dabiici ah. Ka dibna, weedhuhu waxay ku faafaan tarjumaadaha gaaban: "geedkii Yahuudah", taas oo ah sababta badanaa loogu yeedho maanta.
Muraayaddan waxaa lagu gartaa heerka koritaanka gaaban - marka la eego afar-iyo shan jir-jiradu waxay gaari karaan dherer ahaan 1-1.5 m oo keliya, waa mid furfuran intii lagu guda jiray qaliin beerka ah, laakiin ma ahan mid la isku qurxiyo ciidda. Tan iyo dhirta uu yahay mid aad u fudud-jecel, waxaa la doorbidaa in ay ku beeri on dhinaca koonfureed, meelaha aagga u furan qorraxda, laakiin laga ilaaliyo dabaysha.
Cercis Europe waxay haysaa saameynta qurxinta xitaa xilliga fruiting, bisha Sebtembar, oo ay ugu mahad celineyso qurux badan oo dherer ah (illaa 10 cm).
Galbeedka Galbeedka (Cercis occidentalis) - Xayawaanka North America ee jiilaalka-adag. Waxay leedahay taaj qurux badan. Jirka ayaa koraya ilaa 5 m. Caleemaha dhirta noocaani waxay leeyihiin midab casiir leh oo casiir leh, oo ah buro-qaabaysan, gaaraya 7.5 cm dhexdhexaad ah. Ubax waa guduud khafiif ah, dhexdhexaad ah.
Cercis canadianka (Cercis canadensis), hooyo Waqooyiga Ameerika ah, guriga dhexdiisa wuxuu gaari karaa ugu sarreeya 12 mitir, hase yeeshee, marka uu u wareejiyo aag kale oo cimilada ah, midkale ayaa isbedelaya muuqaalkiisa.
Marka hore, waxay lumisaa inta badan kobcitaanka - laga bilaabo geedka wuxuu isu rogaa qaab jir ah. Caleemaha iyo ubaxa waxay noqdaan kuwo yar. Ubaxku maaha mid aad u fiican sida caadiga ah ee dabiiciga ah.
"Canadian" Blooms laga bilaabo bartamaha guga ilaa xagaaga hore, ka hor inta muuqaalka caleemaha. Ubax waa casaan cad, ilaa 1.2 cm dhexroorka, ur aan lahayn. Leaves - waaweyn (ilaa 16 cm), cagaaran madow, qaabka wadnaha, rinji dayrta ee tones huruud ah.
Canadian Zercis waxay leedahay heerka ugu sarreeya ee caabiga barafka ee noocyada kale. Dhirta dhalinyarada ilaa saddex sano jir waxay u baahan yihiin hoy horta suuris.
Laba nooc ayaa loo isticmaalaa dhaqanka qurxinta: caddaan iyo xayawaan.
Guryaha dabiiciga ah Purple kagryanika (Cercis racemosa Oliv.) waa gobollada dhexe ee Shiinaha. Sida caadiga ah, waa geed weyn oo weyn (ilaa 12 m) leh caleenta cagaaran ee cagaaran. Waxaa ubaxyo ubaxyo guduud ah, kuwaas oo ku yaal labada lafaba iyo garbaha, iyo ku dhegaan pedicels gaaban ee inflorescences.
Geedo guduudan ah (Cercis chinensis) koraan qiyaas aad u ballaaran - ilaa 15 m dherer ahaan. Taajirnimadoodu way faaftaa oo weynaataa. Geedaha waxay leeyihiin caleemo dhalaalaya oo ballaaran, oo gaaraya dhexroor ah 6-12 cm.
Wakhtiga ubaxu wuxuu dhacaa Maajo-Juun - dhirta ayaa si weyn ugu daboolan yihiin ubaxyo casaan-guduud ah, ubaxyo casaan ah, laga soo ururiyey rucubood. Leaves muuqan kaddib marka ubaxu dhaco.
Ma taqaanaa? Noocyadaas waxaa laga soo saaray dalka Shiinaha bartamihii qarnigii sagaalaad.
Dhaqanka, dharubka Chinese ah ayaa dhif ah la beeray, sida caadiga ah ee qaabka duurka 5-6-mitir. Noocyo leh ubax cad ("Shiroban"), pink-violet ("Avondale") waa la rijeynayaa. Waxay ilaalisaa jiilaalka qabowga heerkulka ilaa -23 ° C.
Kilyoobi Dembi (Coryaanka Cercis) - Mid ka mid ah noocyada baraf u adkaysta ee Cercis oo ku nool waqooyiga Mexico. Waxay u koraan sidii geed weyn iyo geed. Wuxuu gaadhaa 10 m oo dherer ah. Waxay leedahay taajajir balaaran.
Caleenta noocyadani waa midabeyn, oo lagu xayeysiiyay qaylo-dhajin hoose ee saldhigga - sidaa awgeed magaca. Kordhay dhererka ilaa 5-8 cm. Ubax waxaa lagu ururiyaa inflorescences casaan leh oo leh dherer ah 1-1.5 cm.
Waa muhiim! Sida caadiga ah, guduud waa diiran, sidaas darteed waxa ay si aan caadi ahayn u koraan gobollada leh qaboobaha gaar ahaan qabooba. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hab lagu xaqiijiyo iska caabin buuxa ee barafka ah ee ku xoortay geedaha - si ay u koraan tsercis ka soo abuurka.
Geedka xayawaanku waa mid aad u qurux badan oo aan caadi ahayn in ay u qalanto in ay noqoto mid caan ah oo ay ku faanto meel ku taal beerta, beeraha, iyo dachas. Dhamaantiisba, waxay u muuqataa in ay ka soo kabanayso. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale lagu beeray kooxo leh dhuumo. Waxaa loo adeegsadaa sameynta dariishado. Ku haboon tahay sii kordhaya ee foomka of bonsai.